iCup 2014 Brazil - Isku aadka Linuxeros | Laga soo bilaabo Linux
iCup 2014 Brazil - Isku aadka Linuxeros
cayriin | | Aplicaciones
Iyada oo la dunida hareeraha geeska, ganacsi kasta oo aan ka galno xaafadaheena waxaan uga tagi doonnaa a ciyaarta gacanta ku haya Kuwani way isa soo tarayaan markaan u baahan nahayna ma garan doonno meesha aan dhigno. Markaa mid ayaan kuheysan karnaa farahayaga oo had iyo jeer kujira kumbuyuutarka: iCup 2014 Brazil. 😀
2 ICup 2014 Brazil Qaababka
3 Degso xiriiriyaha
Waxaan ogaadaa mahadsanid a noticia codsigan iCup 2014 Brazil, oo waxaan u arkaa mid xiiso leh inaan gacanta ugu hayo adduunka goor dhow oo aan idinla wadaago.
Waxaa soo saaray Xalka Webka E-Link, waxaa loo qaybiyaa sida freeware wuxuuna rajaynayaa inuu ku taageero mashruuciisa dhanka tabarucaadka.
ICup 2014 Brazil Qaababka
Iyada oo la adeegsanayo iCup 2014 Brazil waxaan helnaa dhameystir ciyaarta, kaas oo lagu dalban karo taariikhda, marxaladaha o kooxaha.
Raadiye si deg deg ah u helno dalkeena, ama xisbiga xiisaha leh.
In ka badan 30 luqadood, tiraduna way sii kordheysaa iyadoo loo mahad celinayo bulshada sameyneysa tarjumaadeeda.
The waqti beddelaad sidaa darteed waxay ku soo beegmayaan kaayaga, mana aha inaan xisaabta sameyno si aanaan u seegin ciyaarta oo aan si sax ah u ogaano waqtiyada ciyaarta la bilaabay.
Taageerada isku xirnaanta adoo adeegsanaya wakiil.
Interface Naqshad wax ku ool ah, si macluumaadka loo waafajiyo cabirka aan rabno inaan ku isticmaalno arjiga.
Ikhtiyaarrada lagu wadaago natiijooyinka iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada.
Cusbooneysiin toos ah Natiijooyinka.
Waxay leedahay taageero loogu talagalay Mac, Windows iyo nidaamka aan jecel nahay Linux.
Nooca Linux-ka ah waan arki karnaa qaabaynta, stats, ka mid ah fursadaha kale ee bilaashka ah, halka kiisaska noocyada loogu talagalay Mac iyo Windows, waxaa lagu heli karaa iyadoo la siinayo a deeq.
In kasta oo tan dambe ay wax weyn noo tahay, haddana xor ayaad u tahay inaad wax ku tabarucdo si kasta ha noqotee haddii aad u malaynayso inay tahay barnaamij wanaagsan, maadaama aad kaa caawinayso sii wadisteeda oo aad u bogaadiso shaqada horumariyaha. 😉
Soo dejiso xiriiriyaha - nooca Linux
Codsiga wuxuu u baahan yahay GTK + 2 iyo libstdc ++. So.6, markaa hubi inaad iyaga rakibtay.
In kasta oo Koobka Adduunku aanu weli bilaabmin, oo aynaan garanaynin sida ugu habboon ee codsigu u shaqeyn doono; Way fiicantahay in gacanta lagu hayo oo la ogaado inay u noqon doonto xulasho wanaagsan kuwa xiiseynaya.
Waxaan rajeynayaa inay adiga dan kuu tahay adna aad ka heshay. 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » iCup 2014 Brazil - Isku aadka Linuxeros
Mid uun baan raadinayey !!!! 😉
Jawaab robert X
heer sare ... wey ila haboontahay sida galoof 🙂
Waan ku faraxsanahay inay kuu adeegayso .. 🙂
Rakibid iyo tijaabin bilaash ah khadka tooska ah
Ku jawaab Chuliano
Waa maxay soo bandhigid fool xun ...
Soo bandhigid, sidee baan u qoray? .. ..ama waxaad u jeeddaa isku xirka arjiga? .. ..hadii uu yahay kan dambe, waa ansax in la dhaho waa codsi la isticmaali doono oo keliya dhowr bilood .. looma baahna in la caddeeyo ilaa xad dhaafka ah interface kiiska ..
liddi ku ah, waa inay lahaato is dhexgal aan caadi ahayn, si loogu caddeeyo isticmaalkiisa
Waxay leedahay interface la mid ah codsiyada android. Xitaa sheegashooyinkaas waxaan u maleynayaa inaysan halkan ku habboonayn, abuuraha boostada maahan horumariyaha.
Macluumaad aad u fiican, maqaal wanaagsan laakiin… markii aad soo degsaneysid oo aadan aheyn faylka .deb ma tilmaami kartaa (kuwa cusub ee aniga oo kale ah) sidee barnaamijkan loogu rakibay?; sidaas darteed waxaan barannaa qaarna dib ayaan u eegeynaa kuwa kale.
Si fudud ayaad u soo dejineysaa ... ... waad fureysaa ... galka ka dhashayna waa la fulin karaa ... ... haddii aadan haysan rukhsad dil ah, waxaad aadeysaa guryaha oo ku dartaa ... x / waddo / ku / fulin karo ..
Mahadsanid!!! Taasi waa waxa aan ka jeclahay GNU / Linux… Waad baraneysaa, waad wadaagaysaa, waad iskaashaneysaa iyo naxariista ku jirta fagaarayaasha iyo bogagga, taasi waa astaamaha naga dhigaya inaan ka duwanaano OS-ga kale.
Dhamaan waa wax aad u fiican laakiin qof ayaa u sheegaya horumariye in Uruguay's DT uusan ahayn Vicente del Bosque ha ha
Marka laga yimaado GNU / Linux markaan tago qaababka wuxuu ii sheegaa inay tahay inaan ku tabaruco si aan u arko taas, in kasta oo dabcan waqtigu uusan iman markii aan hayo xog aan muujiyo.
Jawaab Pablo López
Ku jawaab kuktos
Hoos udhaca iyo imtixaanka, mahadsanid !!!
Mahadsanid! Mid baan raadinayay.
Kuma hayn karo astaanta bilawga.
Mashiinkaygu aad buu u gaabiyaa markaan wado barnaamijkan. Ma garanayo sababta.
Salaan iyo markale, mahadsanid.
Wanaagsan, markaa waan iska cadayn doonaa, kaalay Chilito
waan ka xumahay inaan isticmaalo Windows, laakiin waan shaqeynayaa (ama waan garaacay).
Waad ku mahadsantihiin wax qabad weyn taageerayaasha kubada cagta
Jawaab edgard pimentel
Waan ku faraxsanahay kuwa jecel .. ..na waan ka xumahay kuwa aan jeclayn ..
Si gaabis ah ayuu iigu shaqeeyaa markaan xoqdo ... Waxaan rajeynayaa inay horumariyaan ...
U fiirso noocaas 1.2 ayaa soo baxay, waxay ku dareen macluumaadka ciyaartoyda rasmiga ah..waxay horumariyeen luuqada Isbaanishka, Isbaanishka (Mexico) .. waxayna ku dareen Isbaanish (Argentina) .. .. kuwa kale ..
Halkan xiriirka: http://download.e-link.it/icup/brazil2014/download/?platform=linux
Aad ayey u xun tahay muuqaalka, taasi waa sida Android, waa inay muujineyso inay kuu tilmaamayso inaad ku iibsato barnaamijka iOS, maaddaama dhab ahaantii, noocyada moobiilka loogu talagalay iphone, ipad, iwm.
Faahfaahin la yaab leh, waxaa lagu soo ururiyey Linux Ubuntu 10.04 (nooca ay tahay gcc ayaa sheegaysa inay ku arkayso iyada oo tifaftiraha hexa ah), waa inaan u sheegno qoraaga inaysan mar dambe taageero lahayn 😛
Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Linux Mint 17 Qiana